သတင်း Archives - Lupyo News
အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်လိုက်​သောအခါ
အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်လိုက်​သောအခါ အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်တာ ကိုယ်တောင်ငိုချင်လာတယ် က​လေးဘဝထဲက ​ရွှေပေါက်ကံထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သေးလေးတခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တာ ၁၀နှစ်နီးပါးရှိပြီတဲ့…. ဆိုင်တွေ ပုံမှန်ရောင်းရချိန်မှာ ညဉ့်နက်တဲ့အထိခိုင်းပြီး မနက်အစောကြီးထရတာမျိုး မငြီးမငြူလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ ထမင်းစားရုံလေး ကျောခင်းတနေရာစာလေးနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ စာမတတ် ပေမတတ် တောက ကလေးတွေကို သက်သက်သာသာဈေးနဲ့ ခိုင်းခဲ့ပြီး အခုလိုဆိုင်တွေပိတ်ထားရချိန်မှာတော့ တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုမောင်းထုတ်ပါတယ်တဲ့ လမ်းပေါ်ထွက်လာရပေမယ့် ပိုက်ဆံလည်း တပြားမှမပါ နေစရာ စားစရာလည်းမရှိမန်းလေးပြန်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ ကိုသန်းမင်းကြွယ်တို့ ပုလဲမီးသတ်တွေဆီ အကူအညီတောင်းခဲ့ပေမယ့် သူတို့လည်း လူပြည့်နေလို့ တာဝန်မယူနိုင်ပါဆိုလို့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီလေးငှားပေးပြီး ရွှေပေါက်ကံ Q centre ကို အကူအညီတောင်းဖို့ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးကူညီမယ့်သူပေါ်လာပါစေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ငွေလေးနဲ့လည်း … Read more
December 23, 2020 by Lupyo News
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဒီလိုတွေတောင် ဖြစ်နေကြပြီလား (ဘုရားပေါ်တောင် မရှောင်) မြန်မာလို့တောင် ခေါ်လို့ ရပါတော့မလားဗျာ။ ဒီလောက်ထိ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက်နဲ့ ဘုရားရှေ့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ၊ ဘုရားက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်း ဒါမျိုးကို တားမြစ်သင့်ပါတယ်။ လူကြီးသူမတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေ လာနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ဒီလို ပို့စ်မျိုးပေးတယ်ဆိုတာ အရမ်းရုပ်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ရေကူးကန်ပါတီတို့၊ ကလပ်တို့မှာ ဝတ်တာ အပြစ်မပြောလိုပါဘူး။ အခုဟာက တမင်သက်သက်ကို ဒီနေရာမှာ ဖော်ချင်လို့ ဘုရားပေါ်ကို အပေါ်အကျီင်္ဝတ်ပြီး တက်လာပြီးမှ ဘုရားရှေ့မှာ ဒီလို လုပ်တာ၊ မြန်မာလူမျိုးလို့တောင် ခေါ်ဖို့ မသင့်တော့်ပါဘူးဗျာ။ ပုံပါ မိန်းကလေးနဲ့ သိတဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း ကြုံရင် ပြောပြပေးလိုက်ကြပါဗျာ။ ဖော်သင့်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ မဖော်သင့်တဲ့ အခြေအနေကို ကွဲကွဲပြားပြား … Read more
ကျောင်းဆရာမတွေ ဘာကြောင့်အိမ်ထောင်မပြုကြတာလဲ ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် ကောင်းတဲ့အလားအလာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းဆရာမတွေထဲမှာ အပျိုကြီးဆရာမတွေ ပိုပိုများလာတာတွေ့ရပါတယ်။ တွေ့လိုက်ရတဲ့အပျိုကြီးဆရာမတိုင်းဟာရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ပြီး စားဝတ်နေရေးပြည့်စုံ ကုံလုံတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ ပညာတတ်တွေက သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေချန်မထားခဲ့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုမျိုးဆက်တွေနဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ထူထောင်ကြမှာလဲ။ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယုကတော အမြော်အမြင်ကြီးစွာပဲ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေ အိမ်ထောင်ပြုလို့ ကလေး ၂ယောက်မွေးရင် တစ်ယောက်ကို တာဝန်ယူပေးသတဲ့။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ပညာတတ်မိဘတွေဟာ ကလေးတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင်မွေးမြူနိုင်ဖို့ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီးသားသမီးကို တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စလွန်ရော ကျွံရော သုံးလေးယောက်ထက်ပိုမယူကြတော့ဘူး။ ပိုဆိုးတာက ဘွဲ့ရပညာတတ်မိန်းမတွေကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးရပ်တည်နိုင်တဲ့မိန်းမအတော်များများဟာ အိမ်ထောင်မပြုကြတော့တာပါပဲ။ စာစောင်တစ်ခုထဲမှာ မိန်းမဦးရေက ယောက်ျားဦးရေထက်နှစ်ဆနီးပါး ပိုများလာခဲ့တယ် လို့ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အရက်သောက် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတဲ့လူငယ်တွေအများအပြားရှိလာခဲ့တယ်။ လူမသိ သူမသိသေနေတာတွေလည်း အများအပြားပါပဲ။ တိုင်းပြည်မှာ အရက်နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးကို အလွယ်တကူပေါပေါများများသုံးစွဲခွင့်ရလာကြတာဟာလူသားအရင်းအမြစ်တွေဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင် နိုင်ငံသားကောင်းတွေလည်း ဆုံးရှုံးရတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် … Read more
တက္ကစီ ငှားစီးမိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်
တက္ကစီ ငှားစီးမိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ် ကျမ ဒီနေ့ နေ့ခင်း မြောက်ဥက္ကလာ ကနေ လှည်းတန်းသွားတော့ တက္ကစီ ငှားစီးသွားတယ်။ ကျမက ဖေ့စဖုတ် ကြည့်နေကျလူဆိုတော့ တက္ကစီကို သေချာရွေးပြီး ငှားရတယ်။ ကားထဲမှာလူပိုပါသလား။ အဲကွန်းဖွင့်ထားသလားကြည့်ရတယ်။ ဆေးခပ် မှာကြောက်လို့။ အဲဒါနဲ့ ကားငှားတာ တော်တော် ကြာသွားတယ်။ နောက်ဆုံး တက္ကစီတစ်စီးကျတော့မှ ကားသမားပုံစံကလည်း ရိုးသားတဲ့ ပုံပေါ်တယ်။ အဲကွန်းလည်းဖွင့်မထားဘူး။ လူပိုလည်းမပါဘူး။ ပိုစိတ်ချရအောင် ထပ်မေးလိုက်သေးတယ်။ လူထပ်တင်မှာလား။ လမ်းမှာ အဲကွန်းဖွင့်မှာလား ဆိုတော့ လူထပ် မတင်ပါဘူး တဲ့။ အဲကွန်းကလည်း ပျက်နေတာ တဲ့။ ဖွင့်ချင်ရင်တောင် ဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ သတိရလို့ ထပ်မေးကြည့်လိုက်တယ်။ ကားမောင်းနေတုန်း ဖုန်းမကိုင်ရဘူး။( ဘာညာဗီဒီယိုကားတွေ … Read more
ဘယ်လောက်ချောမောလှပသူဖြစ်နေပါစေ လမ်းမကြီးဘေးမှာ အခုလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်ကောင်းဘာ့မလဲ
ဘယ်လောက်ချောမောလှပသူဖြစ်နေပါစေ လမ်းမကြီးဘေးမှာ အခုလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဆိုတော့လည်း ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ ဘယ်သူကတော့ ထင်ထားမိတဲ့အရာမျိုး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ အဆိုပါ လမ်းမကြီးဘေးမှာ မစင်စွန့်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ Video ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ December 27 ရက်နေ့က Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဟာ Johor- Singapore ဆိုတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ ။ အဆိုပါ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့် လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကားတွေထဲမှာ ခရီးသွားတွေအပြည့်ရှိနေခဲ့တာပါ ။ ထို့အပြင် video ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း ကောင်လေးတစ်ယောက်က အဆိုပါမိန်းကလေးရဲ့ဘေးမှာ ကာကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ထိုင်နေခဲ့ပေမဲ့လည်း မြင်ရတဲ့သူတွေကတော့ မြင်နေရဆဲပါဘဲ ။ ကောင်လေးက ကောင်မလေးရဲ့ခါးကိုကိုင်ထားပေးပြီး သူမ မစင်စွန့်နေတာကို ကူညီပေးနေခဲ့တာပါ ။အဆိုပါ video ကို ရိုက်ယူခဲ့တဲ့ … Read more
ငါးတစ်ကောင်ပုပ်တာနဲ့ တစ်လှေလုံး မှောက်ပစ်စရာ မလိုပါဘူး သာသနာဟာ ရဟန်းနဲ့ဒကာ ဦးနဲ့ပဲ့လို
ငါးတစ်ကောင်ပုပ်တာနဲ့ တစ်လှေလုံး မှောက်ပစ်စရာ မလိုပါဘူး သာသနာဟာ ရဟန်းနဲ့ဒကာ ဦးနဲ့ပဲ့လို ငါးတစ်ကောင်ပုပ်တာနဲ့ တစ်လှေလုံး မှောက်ပစ်စရာ မလိုပါဘူး သာသနာဟာ ရဟန်းနဲ့ဒကာ ဦးနဲ့ပဲ့လို ညီညွတ်မျှတမှ တည်တန့်မှာပါ… ဒီအသံကြားလို့ ခြံဝထွက်ကြည့် လိုက်တော့ ဦးဇင်းတစ်ပါး… အချိန်ကလည်း ညနေပိုင်းကြီး ။ ပြီးတော့ မရင်းနှီးတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါး …မေးကြည့်တော့လည်း နေ့တိုင်း ဆွမ်းလာရပ်ချင်လို့ပါတဲ့ ။ မျက်နှာလေးအောက်ချ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ပြော နေတာပါ ။စိတ်ထဲမယ် ဒီဘုန်းကြီးကတယ်ကျောပါလား ။ အိမ်ပေါက်စေ့ ဆွမ်းမခံချင်တာနဲ့ နေ့တိုင်း ငါ့အိမ်မှာ ဆွမ်းလာခံမယ်ပေါ့ ။ ထိုင်ကိုယ်တော် လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ ။ အို ရှုတ်ရှုတ်ရှုက်ရှုက် နေ့တိုင်းကြီး တာဝန်ကြီး ပါတယ်။ ပြောနေတာကလည်း ရှက်သလိုလို မပြောချင်သလိုလို ။ ပြောချင်သလိုလို … Read more
(၁၀)နှစ် အရွယ် ဘီးဖာပေးတဲ့ ဆရာသမားကြီးနှင့် တွေ့လိုက်ရသောအခါ…
December 4, 2020 by Lupyo News
(၁၀)နှစ် အရွယ် ဘီးဖာပေးတဲ့ ဆရာသမားကြီးနှင့် တွေ့လိုက်ရသောအခါ… ဒီနေ့ နေ့လည်တုန်းက ဆိုင်ကယ်နဲ့ မိန်းနားသွားရင်း ဘီးပေါက်ပါလေရော။ အဲ့ဒီတော့ တွန်းပေါ့လေ။ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဆိုင်က အဖိုးကြီးတစ်ယောက် သူကကြည့်ပြီး ကျွတ်လဲရမှာတဲ့။ကလစ်ဆိုင်ကယ်မို့ သူမဖြုတ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ ခက်တယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ်။ Click ဆိုင်ကယ်တွေက နောက်ဘီးဖြုတ်ရတာခက်တယ်။ ရှေ့နားမှာ ဘီးဖာတဲ့ဆိုင်ရှိတယ် တစ်ပြပဲဆိုတာနဲ့ ဆက်တွန်းသွားလိုက်တာ ၆၉လမ်းနဲ့ ၃၉ လမ်းဆုံမှာ ဒီဆိုင်လေးတွေ့ပါလေရောဗျာ။ ဘီးဖာပေးတဲ့ဆရာက အသက် ၁၀ နှစ်ဆိုတော့ ဟဖြစ်ပါ့မလားပေါ့။ နာမည်က မင်းခန့်ကျော်တဲ့။ကျောင်းက ၄ တန်းဖြေထားတယ်ဆိုပဲ Click ဆိုင်ကယ်ကို မပြီး ဘီးကိုတစ်ယောက်ထဲ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ ကျွတ်အသစ်လဲပေးတာများ အတော်ကျွမ်းကျင်တာဗျ။ သူ့အဖေရဲ့ဆိုင်မှာ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ကူလုပ်ပေးနေတာတဲ့။ အသက် ၈ နှစ်ကထဲက လာကူတာ အခုတော့ တော်တော်လေးကို … Read more
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး…
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး… ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး News.AU မှ ဖော်ပြချက်အရ အသက်၂၁နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး တစ်ဦးမှာ ခေါင်းကိုက်ကိုက် နဲ့ ညအိပ်ယာဝင်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက် မှာတော့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ UK, Gateshead မှာ မိခင်နဲ့ အတူတူနေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး Jessica Cain ပါ။သူမဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တုန်းက ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မသေဆုံးခင်ညတုန်းက Jessica ဟာ မိခင်ကိုခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ပါရာစီတမောတောင်းသောက်ကာ အိပ်ယာစောစောဝ င်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ မနက်ကျတော့ … Read more
မျက်ရည်တွေ ဝဲနေတဲ့ အသက်(၇၀)ကျော် အဖိုးအိုနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဖြစ်ရပ်
မျက်ရည်တွေ ဝဲနေတဲ့ အသက်(၇၀)ကျော် အဖိုးအိုနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဖြစ်ရပ် ဒီနေ့ ဂုဏ် သိက္ခာနဲ့မေတ္တာတရား ကိုလဲလှယ်ခဲ့တယ်.. Busကားပေါ် ကျွန်မ တက်သွားတော့ လက်ထဲမှာပိုက်ဆံ၂ထောင် ပါလာတယ် …. ။ အလုပ်မှာထမင်းစားမှာက1800 ကားခက၂၀၀..ကွက်တိ ။ကားပေါ်မှာရှေ့ဆုံးခုံမှာနေရာရတယ် … .။ အဲ့ဒီမှာ..ချောင်လေးမှာကုတ်ကုတ်လေးနဲ့..မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့. အသက်(၇၀)ကျော်ခန့် ရှိတဲ့အရမ်းဆင်းရဲချို့တဲ့ပုံရတဲ့အဘိုးတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့တယ် … ။ ကိုယ့်ေ ဘးမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေ ကိုဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်တော့အသက်ခပ် လတ်လတ်ပိုင်းတွေအများကြီး.. သူတို့ကို အာ့အဘိုးအိုကြီးကိုမမြင်ကြဘူးလားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ အားမနာတမ်းကြည့်ပလိုက်မိတယ်။ တချို့ဆိုအဲ့အဘိုးအိုခြေထောက်တွေတောင်တက်နင်းကြတယ်။ဘေးနားကအန်တီကြီးကိုမေးကြည့်တော့ အဲ့တာ သူတောင်းစားကြီးလေ ဘယ်သူကသူ့ကိုခုံပေးမှာလဲရွံဖို့လဲကောင်းတာကိုးတဲ့… ကျွန်မ မစဉ်စားတော့ပဲချက်ခြင်းထပြီး ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံ၂ထောင်လုံးပေးပြီး.. “ဘဘ လာ သမီးခုံလာထိုင်ဆိုပြီးတွဲခေါ်ပေးလိုက်တယ်.. ။ စိတ်ထဲမှာလဲ ငါ့အဖေအမေသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေ နဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်။ ကားခ၂၀၀မရှိလို့ပါဆိုပြီးပြော စီးလာတယ်။ကားပေါ်မှာအသိတွေလဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်… ဒါမယ့်မရှက်ပါဘူး..အခုစာရေးနေတဲ့အချိန် ကျွန်မဖျားနေတယ်လေ …. အစာလွန်ပြီးဗိုက်တွေအောင့်လို့…ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်မိတယ်…။ … Read more
ငါးထောင်တန်ကို မီးရှို့ပြတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်
ငါးထောင်တန်ကို မီးရှို့ပြတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ် ၅၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူကို အွန်လိုင်းမှာ မီးရှို့ပြလို့ လင်မယားနှစ်ယောက်တော့ အချုပ်ထဲ ရောက်သွားပြီ။ သူတို့မသိတာက အဲဒီ စက္ကူပိုက်ဆံတွေဟာ သူတို့အပိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ခင်ဗျားပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ငွေစက္ကူတွေဟာ ခင်ဗျားမပိုင်ပါဘူး ဗဟိုဘဏ်ကနေ ခင်ဗျားကို ခဏထုတ်ပေးထားတာပါ။ ခင်ဗျားပိုင်တာက အဲဒီငွေစက္ကူတွေက ဖော်ပြသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ဖလှယ်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးကိုပဲ ပိုင်တာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးစနစ်ကြီးထဲမှာ နိုင်ငံသားတွေက ပါဝင်ဆင်နွဲနေကြတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေ လုပ်အားတွေ အချင်းချင်း ဖလှယ်ကြဖို့ “ကြားခံကိရိယာ” အဖြစ် ငွေကြေးကို နိုင်ငံတော်ကနေ စိုက်ထုတ်ရိုက်နှိပ် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီငွေစက္ကူတွေအားလုံးဟာ နိုင်ငံတော်အပိုင်ပါ။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ခုသဘောနဲ့ တွေးကြည့်ပါ။ ကစားလို့ရတဲ့ ကူပွန်တွေကို ကာစီနိုရုံပိုင်ရှင်က ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ ဒီ ကူပွန်တွေကို ခင်ဗျားအသုံးပြုနေပေမဲ့ … Read more